Man United oo dooneysa da’yarka dalka Germany Lars Bender. - Caasimada Online
Home Warar Man United oo dooneysa da’yarka dalka Germany Lars Bender.
Man United oo dooneysa da’yarka dalka Germany Lars Bender.
Manchester United ayaa diiradu u saaran tahay ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Bayer Leverkusen Lars Bender, sida laga soo xigtay majalada 4-4-2.com ee kasoo baxda Jarmalka Sir Alex Ferguson ayaana markaan qaatay in lala xiriiriyo xidiga heerka caalami ee dalka Germany.
23 jirkaan qadka dhexe ayaa horumar muuqda ka sameynaayey kooxda Bundesliga ciyarta ee Bayer Leverkusen wuxuuna soo jiitay indhaha kooxo badan oo xiiseynaaya. Ka dib markii uu qaab ciyaareed wanaagsan kasoo bandhigay BayArena sedaxdii sano ee lasoo dhaafay taasoo keentay in loogu yeero xulka Tababare Joachim Low.
Lars Bender ayaa ah ciyaaryahan qad dhexe kaasoo awooda inuu ciyaaro box-to-box waxaana uu si aad ah uga soo dhex dhalaalay kooxda Sami Hyypiä xilli ay xiiseyneyso Bavarian.
Ferguson ayaa waayadaan u batay inuu soo iibsado xidigaha da’yarka ah isagoo horay Old Trafford u keenay David de Gea, Phil Jones, Chris Smalling iyo Javier Hernandez halka uu sanadaan kooxda kusoo biirshay Nick Powell iyo weeraryahanka reer Chile Angelo Henriquez.
Mataanka Lars, Sven ayaa isna u ciyaara kooxda Borussia Dortmund.